Akusekude iMali yenze isivumelwano neRussia ngolwamasosha - Bayede News
IMali inelungelo lokufuna ukwesekwa ngamasosha kunoma ngubani emfunayo, kusho uNdunankulu waleli lizwe, ngemuva kokuthi iFrance namanye amazwe angaphandle bezwakalise ukwethuka ngombiko wokuthi uBamako useya emasosheni aseRussia efuna usizo.
UNdunankulu uChoguel Maiga akakuqinisekisanga ukuthi ngabe uHulumeni usezingxoxweni nanoma yiliphi elinye iqembu emazwini akhe akhishwe yizingosi zezindaba zaseMali, kodwa imithombo yezokuxhumana nezokuphepha itshele abezindaba ukuthi iMali sekuseduze ithole isivumelwano nosonkontileka wangasese wezempi waseRussia.
Imithombo ithi inkontileka yaseRussia iWagner Group izonikeza iMali amasosha azoqeqesha amasosha aseMali aphinde avikela izikhulu eziphezulu, ngokuya ngesivumelwano okuxoxiswana ngaso.
IFrance ithe isenzo esinjalo ngeke sihambisane nokuba khona kwamasosha ayo eMali, lapho amabutho aseMali, awaseFrance nawase-Europe, kanye nabalindi bokuthula be-UN, bebelokhu belwa nabavukeli abaxhumene ne-Islamic State kanye ne-al Qaeda.
Iparis ikhathazekile ngokufika kwanoma yiziphi izinkontileka zaseRussia ezizodicilela phansi ukusebenza kwayo kokulwa nobuphekula esifundeni saseSahel esiseNtshonalanga Afrika njengoba umkhankaso wezisebenzi eziyizi-5 000 bese bewubumba kabusha nabalingani abaningi base-Europe, kusho umthombo yezombusazwe.
“Uma abalingani sebenqume ukushiya izindawo ezithile, uma bethatha isinqumo sokuhamba kusasa – senzenjani?” kusho uMaiga esithangamini esithunyelwe ku-inthanethi ngoLwesihlanu yizingosi zezindaba zaseMali iLe Jalon. “Akufanele yini sibe nohlelo lwesibili?”
“Kunezindawo ezilahliwe ezidinga ukuba namabutho namhlanje ukuze zingashiywa zingenalutho. Awekho amabutho anele,” kusho yena, ngaphandle kokusho imininingwane yokuthi yiziphi izinhlelo iMali engaba nazo noma amanye amaqembu angabandakanyeka.
“Ngeke simiswe ekuthumeleni abantu abaqeqeshiwe ezweni elithile,” kungeza undunankulu. Inhlangano enkulu yezepolitiki yaseGermany neNtshonalanga Afrika i-Economic Community of West African States (ECOWAS) nayo izwakalise ukukhathazeka ngokuthi iMali yenza isivumelwano neqembu elizimele lezokuphepha.
Umbutho wamasosha aseFrance usuqalile ukusabalalisa kabusha izikhungo ezisuka eziteshini eziseKidal, eTessalit naseTimbuktu enyakatho neMali kanti izingxoxo ziyaqhubeka zokudlulisela izisekelo emabuthweni aseMali noma e-UN, kusho imithombo yamasosha aseFrance.
Uhlelo lwayo lokuhlela kabusha ukusebenza eSahel lubandakanya ukunciphisa inani lamasosha phakathi kwezi-2 500 kuya ezi-3,000, ukuhambisa izimpahla eziningi eNiger, ukuqeda ukusatshalaliswa kabusha ngoMasingana nokuthumela amabutho akhethekile ase-Europe.